ဟဒီးဆ်: ဂျန္နသ်သုခဘုံသည် အသင်တို့အနက် တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ ဖိနပ်သဲကြိုးထက်ပင် ၎င်းနှင့် ပို၍နီးကပ်သည်။ ဂျဟန္နမ်ငရဲဘုံသည်လည်း ထိုအတိုင်းပင်ဖြစ်သည်။ - တမန်တော်မြတ်(ﷺ)၏ ဟဒီးဆ်ဩဝါဒတော် ဘာသာပြန် စွယ်စုံကျမ်း
ဟဒီးဆ်: ဂျန္နသ်သုခဘုံသည် အသင်တို့အနက် တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ ဖိနပ်သဲကြိုးထက်ပင် ၎င်းနှင့် ပို၍နီးကပ်သည်။ ဂျဟန္နမ်ငရဲဘုံသည်လည်း ထိုအတိုင်းပင်ဖြစ်သည်။
အမျိုးအစား: ထွတ်မြတ်မှုများနှင့် အာဒါဗ်စည်းကမ်းများ။ . နှလုံးသားကို နူးညံ့စေသော ဆုံးမဩဝါဒများ။ . ဂျန္နသ်နှင့် ဂျဟန္နမ် အကြောင်းအရာများ။ .
အိဗ်နုမတ်စ်အူဒ်(ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟု)က ဆင့်ပြန်ခဲ့သည်။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ရစူလ်တမန်တော်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)က မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ဂျန္နသ်သုခဘုံသည် အသင်တို့အနက် တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ ဖိနပ်သဲကြိုးထက်ပင် ၎င်းနှင့် ပို၍နီးကပ်သည်။ ဂျဟန္နမ်ငရဲဘုံသည်လည်း ထိုအတိုင်းပင်ဖြစ်သည်။
တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)က အသိပေးမိန့်ကြားတော်မူသည်မှာ ဧကန်မုချ ဂျန္နသ်သုခဘုံနှင့် ဂျဟန္နမ်ငရဲဘုံသည် လူသားနှင့် သူ၏ခြေထောက်ပေါ်တွင်ရှိသော သဲကြိုးထက်ပင်ပို၍နီးကပ်သည်။ ၎င်းသည် လူသားနှင့် အလွန်ပင်နီးကပ်လှသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် တစ်ခါတစ်ရံ လူသားသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှစ်သက်သဘောတူသည့် ကောင်းမှုတစ်စုံတစ်ရာကို ပြုလုပ်လိုက်ရာ သူမထင်မှတ်ထားသည့် မြင့်မားသော အဆင့်အတန်းသို့ ရောက်ရှိသွားလေသည်။ ယင်းကောင်းမှုသည် သူ့အား ထာဝရစည်းစိမ်ရှိနေမည့် ဂျန္နသ်သုခဘုံသို့ ရောက်ရှိစေသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ လူသားသည် ဂရုမမူဘဲ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်မနှစ်မြို့သော အပြစ်အကုသိုလ်အား ကျူးလွန်မိသောကြောင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ ငရဲမီးသို့ ကျရောက်သွားလေသည်။ ဤသည်ကို ၎င်းပင်မသိလိုက်ပေ။
အမိန့်နာခံမှုသည် ဂျန္နသ်သုခဘုံသို့ပို့ဆောင်ပေးပြီး၊ အပြစ်အကုသိုလ်များသည် ဂျဟန္နမ်ငရဲသို့ ပို့ဆောင်ပေးသည်။
ရည်ရွယ်ချက်မှန်ကန်ပြီး၊ ကောင်းမြတ်သည့် အကျင့်သီလများကို ကျင့်ဆောင်လျှင် ဂျန္နသ်သုခဘုံကို ရရှိရန်လွယ်ကူပေသည်။
အမိန့်နာခံမှုနှင့် အမိန့်ဖီဆန်မှုသည် တစ်ခါတစ်ရံ အလွယ်ကူဆုံးအရာ ဖြစ်နေတတ်သည်။ ထို့ကြောင့် လူတစ်ဦးသည် ကောင်းမှုအနည်းငယ်မျှ ပြုလုပ်ပြီး မရောင့်ရဲသင့်သလို၊ မကောင်းမှုမှလည်း အနည်းငယ်မျှသာ ရှောင်ကျဉ်ခြင်း မပြုသင့်ပေ။
ကောင်းမှုသည် နည်းပါးသည်ဖြစ်စေ ပြုလုပ်ရန်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပြီး မကောင်းမှုသည် နည်းပါးသည်ဖြစ်စေ ရှောင်ကြည်ရန် သတိပေးတားမြစ်ထားသည်။
ပမာပေးခြင်းသည် နားထောင်သူအား ဆိုလိုရင်းကို အနီးစပ်ဆုံး သဘောပေါက်စေရန်အတွက် ဖြစ်သည်။
အကြင်သူသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့်တစ်စုံတစ်ရာကို ရှိရ်က် ယှဉ်တွဲကိုးကွယ်ခြင်းမပြုဘဲ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့လျှင် ဂျန္နသ်သုခဘုံသို့ဝင်ရောက်ရမည်။ အကြင်သူသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့် တစ်စုံတစ်ရာအား ရှိရ်က် ယှဉ်တွဲကိုးကွယ်မှုပြု၍ အရှင်မြတ်နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့လျှင် ဂျဟန္နမ်ငရဲဘုံသို့ ဝင်ရောက်ရမည်။
ဂျဟန္နမ်ငရဲအား စိတ်အလိုရမ္မက်များဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားပြီး ဂျန္နသ်သုခဘုံအား မနှစ်မြို့ဖွယ်ရာများဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသည်။